Accueil > Gazetin'ny nosy > Pôlitika: Horavana tsy ho ela ny depiote?
Pôlitika: Horavana tsy ho ela ny depiote?
Mihazakazaka izay tsy izy ny raharaham-pirenena amin’izao fotoana izao. Hivory any Mahajanga manomboka androany asabotsy 25 novambra 2017 ny antoko HVM (Hery vaovao ho an’i Madagasikara) izay antokon’ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina. Olona an’arivo no ho tonga amin’izany manerana an’i Madagasikara. Tsy ireo HVM ihany nefa no mivory ao amin’ny renivohitr’i Boina fa hampiarahana amin’izany koa ny filan-kevitra ny minisitra izay hotarihin’ny filohan’ny firenena Hery Rajaonarimampianina. Tonga dia mazava avy hatrany ny tian-kambara amin’izany, satria dia natambatra ny fanjakana indray ny raharaham-panjakana sy ny raharahan’ny antokon’ny fanjakana. Amin’ny alalan’izany koa no azo andaniana ny volam-panjakana amin’ny fomba ankolaka ho an’ity antoko ity. Tamin’ny fivorian’ny HVM tao amin’ny foibeny tamin’ny volana septambra 2017 teo dia nanao fanambarana ingahy Rivo Rakotovao rehefa nanontanian’ny mpanao gazety ny amin’ny antoko sy ny fanjakana misy amin’izao fotoana izao dia hoy izy hoe: “ny HVM tompoko dia tsy fanjakana velively”.Tsy afaka namaly ny fanontanian’ny mpanao gazety mahakasika ny zavatra tsy mety ataon’ny fanjakana amin’izao izy tamin’io fotoana io. Izao nefa dia mibaribary toa ny tafika andrefa-tanàna fa tena fanjakana ny HVM, ary mpiara-misaosy aminy.
Mihazakazaka tokoa ny raharaham-pirenena ka may volon-tratra ny HVM ankehitriny mahakasika ny fifidianana amin’ny taona 2018. Fantany tsara fa leo azy ny vahoaka Malagasy nefa mbola te hifikitra eo amin’ny fitondrana ny fanjakana izy ireo. Noho izany dia manao izay fomba rehetra hitanana ny toerana. Niarahantsika nahita ny tetika ratsy saika hanovana ny Lalàmpanorenana amin’ny fotoana tsy ilaina izany. Tsy nahomby io tetika io dia najanona satria mafy ny fanoherana izany na avy eto Madagsikara na avy amin’ny komity iraisam-pirenena. Naongana indray ingahy Honoré Rakotomanana filohan’ny Antenimierandoholona tamin’ny volana novambra 2017. Avy hatrany dia nosoloina an’i Rivo Rakotovao izay filohan’ny HVM sady minisi-panjakana miadidy ny fambolena. Ny anton’izany dia ity filohan’ny HVM ity no tian’ ingahy Hery Rajaonarimampianina hisolo toerana azy rehefa milatsaka hofidina ho filoham-pirenena amin’ny taona 2018 ny tenany. Tetika pôlitika maro no fonosin’izany ary maro koa ny raharaha maizina heverin’ny maro fa ao anatin’izany. Nandeha ny resaka fa ny fifidianana solombavambahoaka indray no hatao aloha ny fifidianana filohampirenena amin’ny 2018. Tsy manaiky izany ny Malagasy sy ny komity iraisam-pirenena ka tsy maintsy najanona indray izany tetika izany.
Amin’izao fotoana izao ary dia mandeha ny resaka fa horavana ny Antenimierampirenena atsy ho atsy. Noho izany dia tsy maintsy hosoloina izy ireo, ka hatao ny fifidianana azy ireo alohan’ny fifidianana izay ho filohan’ny repoblika. Isan’izany hoy ny resaka mandeha no antony nanomezana fiarakodia 4X4 ny depiote izay momba ny fanjakana amin’izao fotoana izao. Izany fifidianana depiote mialoha izany koa dia mampitombo ny fe-potoana hitondran’ingahy Hery Rajaonarimampianina. Izany koa no mbola antony tsy amoahana ny lalàm-pifidianana amin’izao fotoana izao. Toa izany koa ny mahakasika ny datin’ny fifidianana satria mbola tsy fantatra izay hatao aloha.
Isan’ny fivoriana lehibe hotapahina any Mahajanga izany ho an’ireo lohandohany amin’ity antoko ity. Miandry izay ho vokatr’izany isika atsy ho atsy.
Raha izany no mitranga dia tonga amin’ny fitaka sy pôlitika maloto ary fandikan-dalàna indray ny fanjakana Hery Rajaonarimampianina.
Maro dia maro no niseho ho manan-tsaina sy matanjaka amin’ny hitanana fanjakana izay teo alohan’izao fitondrana Hery Rajaonarimampianina izao, nefa tsy nahavita nitazona izany rehefa tonga teo amin’ny fetra farany. Aoka mba hahay handray lesona ny mpitondra fa izany no mampisy krizy foana teto Madagasikara.